RADISH LEH MALAB FOR QUFACA, BORONKIITKA IYO WAXYAABO KALE: FAA'IIDOOYINKA IYO WAXYEELADA MACNAHEEDU WAA, WAXYAABAHA AY KA MID YIHIIN CASIIR KHUDRADDA, SIDA LOO KARSADO SIDA AY U QAADANAYO QAACIDADA IYO QAADASHADA, MUXUU DAAWADA KA CAAWIYAA? - BEER CAGAARAN
Daaweyn ciriiri leh dabocase iyo malab. Sidee loo isticmaalaa qufaca, hargabka iyo cudurrada kale?
Radish waa caanka ma aha oo kaliya u dhadhan, laakiin sidoo kale loogu talagalay tayada bogsashada. Gaar ahaan khudradda noocan oo kale ah waxay faa'iido u tahay malab. Labadan badeecadood ayaa si gooni gooni ah u qiimeeya, laakiin ururadooda ayaa marar badan dhaafaya cuntooyinka kale ee caanka ah ee ku jira xaddiga fiitamiinada iyo nafaqooyinka. Daboolka iyo xayawaanka oo dhammeystiray oo kobcinaya sifooyinka midba midka kale, qofka siinaya daawo rasmi ah.
Maqaalkani waxaan fahamsanahay faa'iidooyinka iyo waxyeelada alaabta ee ku salaysan casiirka cagaarka iyo malab, sida loo daweeyo qufaca, qabowga iyo cudurrada kale, intee in le'eg ayay ku adkeynayaan oo kaydinayaan isku darka.
Halabuurka kiimikada ee malab-dhif ah
In lagu daaweeyo hargabka, badanaa ma aha dabocase laftiisa in la isticmaalo, laakiin casiirkeeda. Waxaa jira cuntooyin badan oo loogu talagalay isku darka dabocase iyo malab, laakiin natiijada cuntooyinka oo dhan waa mid - isku dar ah cabitaanka khudradda iyo malab. Isku darida cabitaanka dabocase iyo malab, oo isku dhafan yahay isugeyntii loo siman yahay, waxay ka kooban tahay 100 g: 175 kiiloomitir; 44 g of carbohydrates; 0.1 g oo baruur ah iyo 1.4 g oo borotiin ah.
Vitamin iyo micro-iyo macronutrient ka kooban dabocase leh malab:
fitamiinada A, C, B1, B2, B5, B6, B9, E, PP, K;
Waxyaabaha raadraaca: birta, iodine, cobalt, copper, fluorine, manganese;
macruufiyeyaasha: kalsiyum, sodium, fosfooraska, magnesium.
Sidoo kale, daroogada ayaa hodan ku ah saliidaha lagama maarmaanka ah, enzymes, acids organic, phytoncides.
Radish leh malab, sida daaweyn kasta, wuxuu leeyahay faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada. Waxaa sidoo kale jira kooxo dad ah oo aan awoodin ama aan la daaweyn karin habkan.
Guryaha waxtarka leh: laga helo waxa ka caawiya?
Daaweynta qallalan qoyan iyo qoyan ee cudurada sida hargabka, boronkiitada (caabuqa xuubka xuubka budada), tracheitis (infakshanka xuubka xuubka ee trachea), caabuqa sambabada.
Saameynta faa'iido leh ee qanjirka thyroid.
Hoos u dhigidda heerarka dhiigga ee dhiigga, nadiifinta weelasha dhiiga.
Horumarinta microflora mindhicirka caafimaad leh, burburinta florojiga jiran.
Dhiirrigeliya rabitaanka cuntada iyo hagaajinta dheef-shiidka.
Daaweynta cudurrada beerka, kelyaha, qashinka biliiga ah, habdhiska dareenka, sciatica.
Ka saarida dulinka.
Caawimaad! Radish leh malab waxaa loo isticmaalaa ma aha oo kaliya daaweynta cudurada kor ku xusan, laakiin sidoo kale loogu talagalay ka hortagga.
In kasta oo faa'iidooyinka Isku darka dabocase iyo malabku wuxuu leeyahay khilaaf:
Gaarafis iyo boog-galka;
garaacid wadnaha ah ama istaroog;
Honey waa alerjin adag oo waa in la qaadaa taxaddar aad u ba'an. Xaalado dhif ah, malab waxay sababtaa falcelin adag oo ah qaabka cudurka urtikaria ama dermatitis.
Sidee loo qaataa cabitaanka xididka? Laguma qaadi karo tiro badan xittaa dadka aan dhibaato ku qabin mareenka caloosha, maxaa yeelay waxay keeni kartaa murqaha mindhicirrada, xanuunka, deris-wareerka derbiga caloosha.
Noocyada isticmaalka dadka waaweyn iyo carruurta
Daaweynta qufaca, taas oo aan la tirtirin daawooyinka, iyo si dhakhso ah u soo kabashada, dadka waaweyn waa inay qaataan 1 tbsp. dawada qaadada 3-4 jeer maalintii. Carruurta 7 sano jir ah, qiyaasta maalin kasta ee dabocase leh malabku way ka yar tahay dadka waaweyn, waxayna qaadataa 1 saac oo qaadasho 1-2 jeer maalintii cuntada kadib.
Si loo daweeyo ilmo isku dhafan mudo ka badan 7 maalmood, dhakhaatiirta kuma talin. Haddii wakhtigaas lagu jiro qufuc aan la dhaafin, waa lagama maarmaan in la qaato habab badan oo halis ah. Waa inaad sidoo kale hubisaa in ilmaha uusan xasaasiyad ku lahayn qaybaha daawada.
Sidee loo isticmaalaa dadka qaangaarka ujeeddooyinka daawooyinka?
Radish leh malab waa shaki la'aan daaweyn dad fara badan ee hargabka, cudurrada faafa iyo cudurrada kale.
Si kastaba ha ahaatee is-daaweynta cudurrada ba'an ee ka yimaada waddooyinka sare ee hoose iyo kuwa hoose ee kaliya ee ay daweyntu ku dhacdo ayaa leh waxyeello leh dhibaatooyin iyo dhacdooyinka noocyada joogtada ah. Daaweynta cudurrada noocan oo kale ah waxaa sameeya dhakhtar kaliya.
Cabitaanka isku dar ah bogsashada ee malabka iyo dabocadku waxay keeni doonaan faa'idada ugu badan sida daaweynta dheeraadka ah ee daaweynta uu dhakhtarku qoray.
Sidee loo doortaa khudaarta?
Waxaa jira noocyo badan oo dabocase ah. Nooc kasta wuxuu leeyahay hanti qiimo leh. tusaale ahaan:
Radish Lobo (darajo) ayaa jidhka nadiifiya, waxay hagaajinaysaa dheefshiidka waxayna ka hortagtaa horumarinta beerka dufanka leh.
Khudradda cagaaran cad waxay ka caawisaa sidii loo xoojin lahaa nidaamka difaaca jidhka oo looga saaro jidhka bakteeriyada waxyeellada leh.
Daboolka madow loo aqoonsan yahay inuu yahay hoggaamiye ku jira saliidaha lagama maarmaanka ah iyo fitamiin C waxaana loo tixgeliyaa sida ugu waxtar leh daaweynta qufaca.
Green Root loo isticmaalo cudurada kelyaha iyo nidaamka wadnaha. Dabocase cagaaran ayaa sidoo kale waxtar u leh hargabka, si kastaba ha ahaatee, si ka duwan sida madow, waxay leedahay saameyn daweyn oo fudud, sidaa daraadeed waxaa loo qoraa carruurta si loo daaweeyo qufaca.
Waxaa lagama maarmaan ah in la doorto ma aha oo kaliya noocyada saxda ah, laakiin sidoo kale dalagyada xididada tayo sare leh.
Xeerarka doorashada xulashada:
Cabbirka miro ku haboon wuxuu u dhexeeyaa 5 ilaa 15 cm dhexroor. Roob yar yar waxaa loo tixgeliyaa mid aan fiicnayn, weyn oo sababa fiitamiin.
Khudradda waa in aysan laheyn wax dillaac ah, waxyeelo iyo raadinta cayayaanka dibadda - dhammaantani waxay keenaysaa sii xumeynta badeecada.
Sida loo diyaariyo hal-abuurka: tusaaleyn sawir leh
Tixgeli qashinka lagu sameeyo samaynta malab-naadir ah, iyo qaar ka mid ah waqtiyada habka lagu arki karo sawirka. Wixii diyaarinta tincture daaweyn ugu caansan waxaad u baahan doontaa 1 dabocad dhexdhexaad ah iyo 2 tbsp. malqacadaha malab ah.
si taxadar leh u dhaq dhirta dalagga ka soo baxa biyaha oo jaraya dusha sare;
Isticmaalida mindi ama qaaddo si aad u sameyso nasasho ka soo baxa xididka;
ku rid 2 saacadood oo malab ah ee jeexjeexa;
daboolo daloolka hore ee laga jaray kore;
ku adkeyso 10-12 saacadood.
Si loo sii wado, waa "dheriga" waa in lagu meeleeyaa koob ama baaquli. Nidaamkan leh hal xidid ayaa lagu celin karaa ilaa 3 jeer, ka dibna isticmaal khudradda cusub. Waxaa jira hab fudud oo loo diyaariyo daawadan. Waa ku filan in la isku daro marka la isku daro cabitaan cusub oo casiir ah iyo malab, ha u istaagaan maalin. Sharoobada keentay waxaa lagu keydin karaa qaboojiyaha.
Sidee loo isku daraa oo qufacaya?
Radish iyo malab waxay si waxtar leh ugu daaweeyaan boronkiitada, kicinta xaakada sanbabada. Saameynta daaweynta waxaa lagu gaaray sababtoo ah ficil-celiye, anti-bararka, tallaalka difaaca jirka iyo antimicrobial ee daroogada. Iyada oo la raaciyo tincture caadiga ah oo la isticmaalayo boronkiitada iyo aad u adag tahay in la diyaariyo macnaheedu.
Tixgeli Sida loo diyaariyo daaweynta boronkiitada:
Iska yaree xabadaha oo ah khudradda xidid yar iyo dhowr warqadood oo ah aloe.
Ku rid wax kasta oo digsi ah, ku shub 1 koob oo biyo ah oo isku kari.
Ka dib 20 daqiiqo, ku dar 1 tbsp. qaaddo buur leh malab, isku walaaq oo qabow.
Isku dar ah waa in la qaataa 3 jeer maalintii, 2 tbsp. qaadooyin. Koorso - 2 asbuuc.
Si loo daaweeyo boronkiitada waxaa sidoo kale loo isticmaalaa dabocase malab ah sida malab ah. iyo malayga. Waxaa lagama maarmaan ah in la dubo 100 g oo ah dabocase iyo malayga on hayso ganaax, isku dar 1 tbsp. qaaddo malab iyo isla qiyaasta milixda. Maqnaanshaha heerkul sarreeya, dhabarka bukaanka ayaa lagu xardhay xerada, oo lagu duuduubay maro oo habeenkii tagay.
Waa muhiim! Radish leh malab waxaa loo isticmaali karaa boronkiitada oo kaliya sida buuxinta daaweynta ugu muhiimsan, iyo keliya ogolaanshaha dhakhtarka!
Sida loo kariyo dabocase madow malab ah ee daaweynta qufaca carruurta, fiiri fiidiyaha hoos ku xusan:
Sidee loo cabbaa daawooyinka qabowga?
Daawada waa in la qaataa 4 jeer maalintii iyo 1 tbsp. qaaddo 30 daqiiqo ka dib marka la cuno si loo baabi'iyo suurtagalnimada gawshada cas. Koorsada daaweynta waa ilaa 10 maalmood.
Miyuu caawiyaa cudurka kelyaha?
Rootiga iyo xayawaanka xayawaanka ayaa sidoo kale wax ku ool ah in laga saaro dhagxaan kelyaha. Laga soo bilaabo tincture caadiga ah waxaa loo diyaarin karaa badeecada daawada ee kaydinta dheer:
Waa lagama maarmaan in la isku daro qaybo siman oo casiir ah, malab iyo vodka.
Isku darka soo go'ay waa in lagu shubaa weel dhalada ah kuna adkee meel qabow mugdi ah 3 maalmood.
Faleebada alkolada waxaa loo isticmaalaa kaliya marka la ansixiyo dhakhtarka iyo 1 tbsp. qaaddo 3 jeer maalintii 10 daqiiqo cuntada ka hor. Koorsada daaweynta waa 21 maalmood.
Daaweynta cudurada gallstone
Haddii aysan jirin wax dhibaatooyin ah beerka, Radish leh malab waa ku haboon yahay daaweynta cudurka gallstone. Waa lagama maarmaan in la cabbo 200 ml maalintii oo ah isku darka casiir iyo malab kadib cunto kasta. Caanaha iyo shinni ee kalluunka waa in lagu qaso ka hor inta aan la isticmaalin.
Koorsada daaweyntu waa 3 asbuuc oo leh bil gudaheed.
Radish leh malab waa daaweyn dabiici ah oo qaali ah in loo isticmaalo daaweynta iyo ka hortagga cudurada badan.
Ka hor inta aan la daaweyn cuntada sida caanka ah sida cudurada daran sida boronkiitada, oof-wareenka, cudurada gallstone, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid ra'yiga dhakhtarka. Haddii dhakhtarku aanu aqoonsanayn waxtarka dabocodka malab ee daaweynta cudur gaar ah, ha is-daweynin.